नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ५०० र १००० का भारु २ करोड मात्रै – KhabarPurwanchal
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ५०० र १००० का भारु २ करोड मात्रै
खबर पूर्वाञ्चल, २४ कार्तिक २०७३, बुधबार १८:३९
कुटनीतिक पहल सुरु, गभर्नरले आरबीआइका अधिकारीलाई फोन गरे
२४ कात्तिक, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ५०० र १००० दरका पुराना भारतीय नोट (भारु) नचल्ने घोषणा गरेपछि त्यसले भारतसँगै नेपालमा पनि हंगामा मच्चायो ।
मंगलबार राती भारतीय राजदूताबासका सिनियर कर्मचारीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाललाई फोन गरेर प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा बारे जानकारी गराएका थिए ।
यो खरब सुनेसँगै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपाल के गर्ने र कसो गर्ने ? निकै अतालिए । गभर्नरले बुधबार बिहानका लागि व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाउन लगाए ।
बुधबार बिहान बसेको राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको बैठकले बुधबार दिनभर ५०० र १००० दरका भारु नसाट्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र गर्‍यो ।
बैठकले भारतीय दूताबास र भारतीय रिजर्भ बैंकलाई औपचारिकरुपमा पत्र पठाएर नेपालमा भएको नोटको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सोध्ने निकर्ष निकाल्यो ।
बुधबार दिउसो राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापन र भारतीय रिजर्भ बैंकको उच्च व्यवस्थापनबीच नेपालमा भएको भारुको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल भएको गभर्नर डा. नेपालले बताए ।
‘आरबीआइका उच्च अधिकारीहरुसँग हामीले नेपालमा भएका नोटको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गर्दै कुटनीतिक पहल थालिसकेका छौं,’ गभर्नरले भने, ‘आरबीआइका अधिकारीहरुसँग टेलिफोनमा पनि कुरा भयो । पत्राचार पनि भइसकेको छ ।’
गभर्नर डा. नेपालका अनुसार भारतीय पक्षले राष्ट्र बैंकको आग्रहलाई सकरात्मक पहल थालिदिने आश्वासन दिएका छन् ।
‘उहाँहरुले हामी पहल गर्छौं भनेर भन्नुभएको छ,’ गभर्नरले भने, ‘उहाँहरुले ठोस निर्णय नदिएसम्म नेपालका कुनैपनि बैंक, वित्तीय संस्था एवं मनि चेञ्जरले भारु साट्दैनन् ।’
भारतीय प्रधानमन्त्रीको निर्णय भएकाले यसमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने र कुटनीतिक पहल मात्रै गर्न सक्ने उनको भनाई थियो ।
भारतीय पक्षले जस्तो जवाफ दिन्छ, राष्ट्र सोही अनुसारको निर्णय गर्ने गभर्नर नेपाल बताउँछन् । ‘हामी त उहाँहरुको जवाफको प्रतिक्षामा छौं,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार दिनभर बैंक तथा वित्तीय संस्था र मनि चेन्जरहरुसँग लिखित र मौखिक रुपमा ५०० र १००० दरका भारु कति छन् भनेर माग्यो । साँझ ५ बजेसम्ममा अधिकांस बैंक वित्तीय संस्था र केही मनि चेञ्जर कम्पनीहरुले आफुहरुसँग भएको भारु बारे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराए ।
‘८० प्रतिशत बढी तथ्यांक आइसक्यो, जसअनुसार नेपालको वित्तीय प्रणालीमा २ करोडसम्म ५०० र १००० दरका भारतीय रुपैयाँ छन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने ।
राष्ट्र बैंकसँग भने २ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै सो दरका नोटहरु भएको उनले जानकारी दिए । केही बैंक र मनि चेञ्जरहरुको विवरण आइसक्दा ५०० र १००० दरका बढिमा सवा २ करोड मात्रै भारु हुने उनले बताए ।
५०० र १००० दरका भारु नेपालमा बैधानिकरुपमा प्रचलनमा आएको एक/डेढ वर्षमात्रै भएकाले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सो दरका नोट खासै धेरै नभएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
भारत सरकारको सहमतिमा ०७१ फागुनदेखि मात्रै नेपालमा बैंकिङ प्रणालीबाट ५०० र १००० दरका भारु सटही हुन थालेको थियो । त्यसबेलासम् मभारत सरकारले नै सो दरका नोटको सटहीमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले लोकसभाको निर्वाचनमा भारतमा भएको कालो धन बाहिर ल्याउने र कालो धनवालालाई कारवाही गर्ने । आफू प्रधानमन्त्री भएको १०० दिनमा यो काम गरेरै छाड्ने मोदीको घोषणा थियो ।
तर, केही ढिलो गरेर मोदीले मंगलबार ५०० र १००० दरका पुराना भारु अवैध घोषणा गर्दै नगद कालोधन थोपार्नेहरुविरुद्ध निकै ठूलो हमला गरे । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको हो ।
नेपालको कूल मुद्रा प्रदायमध्ये २० प्रतिशत हिस्सा भारतीय रुपैयाँले ओगटेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपाल र भारतबीच खुल्ला सीमाना भएकाले र एक अर्काको देशमा काम गर्न आउने जानेहरुको संख्या ठूलो रहेकाले त्यसको एकिन तथ्यांक भने छैन ।
खासगरी नेपालका पश्चिम पहाडी जिल्लाहरुमा भारुको प्रयोग अत्यधिक हुने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, नेपालको दुइतिहाइ व्यापार भारतसँगै हुने भएकाले सीमा क्षेत्रका व्यवसायीहरुले पनि मोटो रक मभारु राखेका हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।अनलाइन खबर
विराट व्यापार संघले वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरि मनायो
१२ असार २०७७, शुक्रबार २१:२३
रिफ्ल्याक्सन युनिसेक्स हेयर एण्ड सैलुनको शाखा अव विराटनगरमा
१० असार २०७७, बुधबार २१:२१